कोरोनाको दुष्प्रभाव– विकराल बन्दै मानसिक समस्या – Sulsule
सुलसुले २०७८ वैशाख २१ गते १५:३९ मा प्रकाशित
आफ्ना ४१ वर्षीय श्रीमान्सँग अनिताको अघिल्लो वैशाखको अन्त्यमा फोनमा कुराकानी भएको थियो । दुई दिनअघि टाउको दुखेको छ भनी फोन गरेका उनीसँग दुई दिनपछि फोन गर्दा उठेन । उनले फोन उठाउन छोडेपछि घर परिवारमा चिन्ता छायो ।
दुबईमा उनको मृत्यु भएको १६ दिनपछि त्यहाँको सरकारले नै उनको अन्त्येष्टि ग¥यो । यता घरमा उनको काजक्रिया भयो । उनी विदेश जाँदा रु. पाँच लाख ऋण लिएका थिए । उनको दुबईमा खासै कमाई पनि थिएन । “दुई/तीन महिनामा कहिले रु ४० हजार त कहिले रु. ५० हजार पठाउँथे । त्यो रकम घरखर्चमै सकिन्थ्यो । श्रीमान्ले पठाएको रकम बचाएर अनिताले रु. दुई लाख ५० हजार ऋण तिरिसकेकी थिइन् । रु. दुई लाख ५० हजार ऋण तिर्न बाँकी नै थियो ।
मनोसामाजिक परामर्शकर्ता धनराजले १० दिनसम्म लगातार अनिता र उनका छोराछोरीलाई परामर्श सेवा दिए । बिस्तारै अनिता शान्त भइन् । धनराजको सल्लाहमा उनले श्रीमान्को बीमा रकम दाबी गरिन् । बीमाबाट रु. १० लाख प्राप्त भयो ।
“बीमाको रकम पाएपछि श्रीमान्ले दुबई जाँदा लिएको ऋण तिरेँ । बचेको रकमले सानो घर बनाउन थालेकी छुँ”, उनले भनिन्, “समस्या त अहिले पनि छ । पढिरहेका दुई छोरी पढाइ छोडेर भारत कमाउन गएका छन् । मैले जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ भन्ने नै बुझेँ । अब बाँच्छु । छोराछोरीको सहारा बन्छु ।”
शेरबहादुर मलेसिया गएको पाँच वर्ष भएको थियो । उनी मलेसिया गएको तीन वर्षपछि एकपटक घर आएका थिए । फेरि मलेसिया गएका उनले दुई वर्ष उतै बिताएर सधैँका लागि घर फर्कने योजनामा थिए । गत वर्ष साउनमा उनले आत्महत्या गरेको खबर आयो । कविताका चार छोराछोरी सन्तान छन् ।
गत वर्ष साउन १६ गते साँझ घरमा श्रीमती र छोराछोरीसँग कुराकानी गरेका उनी त्यसपछि सम्पर्कविहीन भए । कविताको जीवनको त्यो अति कठिन दिन थियो । १७ गते बिहानै उनको मृत्युको खबर आयो । “अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण उहाँको खासै काम चलेको थिएन ।
सातामा दुई दिन सामान्य खर्चका लागि काम दिएको छ भन्नुहुन्थ्यो । हवाई सेवा खुलेपछि घर फर्किन्छु भन्नुभएको थियो”, आँसु झार्दै श्रीमती कविताले भनिन्, “एक्कासि उहाँको मृत्युको खबर आयो । तेह्र दिनपछि बाकसमा उहाँको शव फर्कियो ।”
शेरबहादुर रोजगारीका लागि मलेसिया जाने क्रममा ऋण लिएका थिए । कविताले बीमा दाबी गरिन् । बीमाबापत रु. १४ लाख पाइन् । अघिल्लो वर्षदेखि विश्वभरि फैलिएको कोरोना महामारीका कारण मानव जाति नै सन्त्रासमा परेको छ ।
नेपालमा पनि कोरोना महामारीका कारण हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । अझ रोजगारीका लागि भारत तथा अन्य मुलुक गएका नेपालीको अवस्था झन् दयनीय बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरु आफ्नो तथा घरपरिवारको चिन्ताले पिरोलिएका छन् ।
घरमा भएका श्रीमती, आमाबुबा, छोराछोरीसहित परिवारजन दोहोरो चिन्तामा छन् । कोरोना महामारीको त्रासले घर रोजगारी गुमाएर वा छोडेर घर फर्किएकाहरुमध्ये अधिकांश बेरोजगार छन् । कतिपय घरपरिवारको लालनपालन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले मानसिक रुपमै कमजोर बन्दै गएका छन् ।
उनका परिवारका एक सदस्यका अनुसार भारतबाट फर्किएको केही महिनापछि मनोज घन्टौंसम्म एक्लै टोलाउन थाले । उनी आफैँसँग कुरा गर्दथे । परिवारका सदस्यहरुसँग झर्किन्थे । रातभरि सुत्दैनथे ।
भारतसहित अन्य मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति तथा उनका परिवारजनमा मानसिक समस्या देखिन थालेपछि कैलालीमा केही मनोपरामर्शकर्ताहरुले उनीहरुलाई मनोपरामर्श सेवा दिने गरेका छन् ।
कैलालीमा एक संस्थामा कार्यरत लक्ष्मी चौधरीले भनिन्, “हामीले एक वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति तथा उनका परिवारका सदस्यहरु ८६ जनालाई मनोपरामर्श सेवा दिएका छौँ । मनोपरामर्शकर्ताहरुले मनोसामाजिक समस्यामा रहेकाहरुलाई परामर्श दिने, उपचारका लागि सहयोग गर्ने गरेका छौँ ।”
डाक्टर बेल्वासेका अनुसार अहिले उपचारमा आउने मानसिक रुपमा अस्वस्थ अधिकांश बिरामीमा कोरोना महामारीको असर परेको छ । राससका अनुसार कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका, आर्थिक सङ्कटमा परेका, बेरोजगार भएर सबैजना घरमै बस्दा अशान्ति बढेको आदि कारणले मानसिक समस्यामा वृद्धि भइरहेको छ ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन उपशाखाका संयोजक बलबहादुर रावल स्थानीय सरकारले मानसिक समस्यालाई स्वास्थ्य समस्याका रुपमा नबुझेका कारण नै समस्या भइरहेको बताउँछन् । “मानसिक समस्या पनि मानव स्वास्थ्य समस्याको जटिल अवस्था हो । यसले परिवार मात्र नभएर समाजलाई नै असर पार्छ, तर हामीकहाँ नीतिगत रुपमा कुनै काम भएको छैन”, जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन उपशाखा संयोजक रावलले भने, “हरेक स्थानीय तहमा मनोचिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई मनोसामाजिक तालीम दिएर सेवामा खटाउन आवश्यक भइसकेको छ ।”